घरबाटै निकालेर निमोठेर युवकको ह त्या, बुढी हजुर आमाले रुदै सुनाइन भित्री रहस्य र नालीबेली हेर्दा कस्को मन रुदैन होला! (भिडियो सहित) «
प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आईतवार ०८:०२
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० मोरङका १८ बर्षीय सन्दिप भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै पीडित परिवारले नेकपा (ओली समूह) का केन्द्रीय सदस्य युवराज वास्कोटालाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । मिडियामा कुराकानी गर्दै सन्दिपकि आमाले रुदै नेता बास्कोटाको घरमा छोराको रहस्यमय मृत्यु भएकाले उनीमाथी छानविन गर्न माग गरेकी हुन । नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएकै कारण प्रहरीले बास्कोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेको उनले आरोप लगाएकि छिन ।
उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि बास्कोटालाई पक्राउ गर्नु पर्ने बताए । केही समयदेखि छोरालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी नेता बास्कोटाले प्रयोग गर्दै आएको र उनकै घरमा मृ त अवस्थामा फेला पर्नुले पनि घटना नियोजित देखिएको भण्डारीको भनाई छ ।
बास्कोटाकै योजनामा छोरालाई अन्य स्थानमा ह त्या गरी कोठामा सुताएको र आफुहरु पुग्नुअघि नै मुचुल्का तयार पार्नुले पनि घटना षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आशंका गरेको उनले बताए । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भन्दा पनि प्रहरीले बास्कोटाको बचाउ गरी पीडित परिवारलाई न्यायको साटो थप पी डा दिएको उनले बताए । आफूहरुले बास्कोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको सन्दिपका दाजु दिवस भण्डारीले बताए ।
अहिलेसम्म वास्कोटा पक्राउ नपर्नुले पनि प्रहरीकै मिलोमतो हुन सक्ने उनले आशंका गरे । दोषी हो वा होइन अनुसन्धानबाट खुल्ने हो तर, खोई अहिलेसम्म बास्कोटा किन पक्राउ परेनन् दिवशले प्रश्न गरे । बास्कोटा खराब ब्यक्ति भएको र उनीसँग हिमचिम नगर्न भाईलाई पटक पटक भनेपनि नमानेका कारण यो घटना भएको उनको भनाई छ । पौष १४ गते विहान नेता बास्कोटाको घरमा भण्डारीको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको थियो । बुढी हजुरआमाले घटनाको सुरुदेखि आजसम्मको भित्री रहस्य र नालीबेली बताएको भिडियो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला! तलको भिडियोमा हेर्नुहोला